Ndị ọkachamara na Semalt na-akọwa Otu esi achọta ma dezie peeji nke na ọdịnaya di iche
Nkọwapụta ọdịnaya bụ nnukwu mbido mgbe ọ na-abịa ogo na engines ọchụchọ. SEObụ usoro mgbagwoju anya, nke gụnyere ọrụ dịka ahịa ahịa, njikọ ụlọ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Otú ọ dị, ịmezi oyiriọdịnaya nwere ike isi ike. Ihe ndị bụ isi nke usoro a bụ:
Ọ na - achọ naanị mgbanwe ntanetịime
Ịmalite ịmalite ịmalite ngwa ngwa ma ọ bụrụ na mmadụ edezie ya
Google crawler na-agụ na mgbanwe na saịtị gị ngwa ngwa
Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Igor Gamanenko na-akọwa otú ị ga-esi rụọ ọrụ na mbipụta oyiri n'ụzọ ziri ezi.
Olee otú ọdịnaya nwere ike isi mee ka ikike
Dị ka google webmaster blog, aha nke ọdịnaya weebụ gị ma ọ bụ biputere postenwere ike ime ka ọ bụrụ ihe a na-enweta site n'ọtụtụ URLs - vps cheap linux computer. O doro anya, nke a nwere ike ime ka ibe dị iche iche dị ntakịrị na ọdịnaya yiri nke ahụ, nke mere na ọ dị alanyocha SERP gị na ụfọdụ mkpụrụ okwu kpọmkwem. Ịnabata ikike dị mfe karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ejikọta njikọ na peeji nke canonical.
Onye kwesiri ijikọta njikọ ya na ntinye ederede dị mfe 301 na ọdịnaya weebụ mbụnke mere na njikọ niile na-ezo aka na peeji nke ọdịda. N'ihi ya, ikike na ịzụ ahịa nke ibe ahụ na-abawanye n'otu ihe ahụ,nke na - arụpụta ihe Google chọrọ ịhazi.
Ịmara ma ị nwere nsogbu nke ọdịnaya abụọ dị mfe. Naanị ịgaihe nyocha gi nke kachasi nma dika Google (ma obu nke gi na-achotacha), ma tinye na ntinye gi: yoursitename.com. Mgbe ọtụtụ peeji nke na-ezo aka naE depụtara aha otu, ị nwere njikọ abụọ. Nke a pụtara na akwụkwọ ahụ, ma ọ bụ ngwaahịa, na-enweta ọtụtụ oherena bots Google..
Ụzọ kachasị esi enweta ọdịnaya abụọ na-achọpụta nọmba nke ihema ọ bụ peeji nke Google. Otu peeji nke nwere mkpado nwere ike ime ka ị na-atụgharị. Ihe akaebe maka nke a bụ na ọ nwere ike ibuli elu na ụfọdụNgwaahịa dị ala karịa, nke Google na-edeghị aha.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, Google nwere ike ịmepụta nsonaazụ ọchụchọ nke ngwaahịa karịa ka ị nwerena ebe nrụọrụ weebụ gị. Mgbe ọnụ ọgụgụ nchọta ọchụchọ gafere ọnụ ọgụgụ weebụ gị, enwere ohere ị nwere njikọ abụọ.Mgbe ị na-agbanwe mgbanwe na saịtị gị, ọ nwere ike iwepụta izu iji melite akwụkwọ gị niile nke nwere ike ịbụ ihe karịrị 800,000. Nke a pụtawara ihe mere aIhiehie 404 nwere ike ikpo oku ndị ọrụ na ịpị ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị ahụ na URL ochie.
Otu esi edozie ọdịnaya abụọ
Na mbụ, igbochi crawlers weebụ Google site na iji ngwa robots.txt dị mfe kacha mmaụzọ iji lebara ọnọdụ a anya. Otú ọ dị, aghụghọ a anaghị eme ka ikike na aha dị elu na peeji ndị nwere ike. Njikọ ahụ ka dịn'agbanyeghị na ị na-ezere ntaramahụhụ. Otú ọ dị, ọrụ SEO adịghị mma.
301 redirects na Apache bụ ụzọ kachasị mma iji degharịa mkpado na-adịgide adịgide.Redirects na-arụ ọrụ nke oma karia mkpado aha. Mwepu nke edemede na ibe weebụ gị na-enyere aka ịmepụta otu n'ime redirects,nke bu ihe kwesiri ntukwasi obi, ihe nghota. Dịka ọmụmaatụ, kama ịmepụta saịtị.com/category1/product1, jiri saịtị / product1 naanị.
N'ikpeazụ, isi ihe dị n'azụ na-agbakọta ọdịnaya abụọ na-agagharị na backlinks.Mgbe backlinks na-ezo aka na peeji nke nwere ọdịnaya abụọ, ha na-emekarị ka ịda ọkwa gị nakwa ka ọ na-emetụta ngbanwe gị.Mmetụta na ikike nke ọdịnaya abụọ nwere ike ịdị ala. Ya mere, a ga-emepụta usoro ndị a kọwara n'elu iji zereGoogle algorithm penalties.